लायन्स क्लबले शुक्रबार गरेको सम्मान लिँदै नायिका करिश्मा मानन्धर । तस्वीरः अनलाइनखबर
मैले चाहियो भनेको छैन, कांग्रेस एमालेले बुझ्ने कुरा हो : प्रचण्ड
निर्वाचन प्रणालीबारे प्रचण्डको नयाँ प्रस्ताव ६ भदौ, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व नपाएका कारण आफूले मोहन वैद्यसँग मोर्चाबन्दी नगरेको स्पष्ट पारेका छन्...
केपी ओलीले ३ वा ५ प्रदेशको अडान छाडे
संघीयताबारे एमालेको बटमलाइन सात प्रदेश ६ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले चीन र भारतसँग सिमा जोडिने गरी ७ प्रान्त सहितको संघीयतामा जानुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । तीन दिनदेखि...
जनआन्दोलनका उपलब्धीलाई अपरिवर्तनीय बनाउन आग्रह ६ भदौ, काठमाडौं । नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुबारे युवा सभासदसँग छलफल गर्न सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा सभासद दूर्गा पौडेलले डा. बाबुराम भट्टराईलाई सोधिन्- ‘संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीयबाट...
सुधिर बस्नेतलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्चको आदेश
चरीको शव बुझ्न परिवार सहमत, शनिबार अन्त्येष्टि गरिने
‘दाइ’ मारेर गार्इ बचाउन पाइँदैनः पासाङ शेर्पा
एमाले निकट कर्मचारी अख्तियारको विरोधमा
यी हुन् वर्षका उत्कृष्ट तस्वीरहरु (फोटो कथा)
मलेसियामा हर्कबहादुर निरौलाको निधन, श्रमिकहरुले काम रोके
स्याङ्जा परिवार कोरियाद्वारा अस्पताललाई निशुःल्क एम्बुलेन्स
वैद्यलाई मिलाएर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रचण्डको प्रस्ताव
सरकारमा कांग्रेसले दादागिरी देखाएको बामदेव गौतमको आरोप
पत्रकार महासंघ युके र हेल्प नेपालद्वारा सहयोगका लागि अपील
बालोटेलीले लिभरपुलबाट सिटीविरुद्ध खेल्न सक्ने
प्रधानमन्त्रीलाई भटेर अमेरिकी राजदूतले गरे स्वास्थ्यलाभको कामना
६ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले घरजग्गा व्यवसायी सुधिर बस्नेतलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ । जिल्ला र पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सरकारले गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चका...
६ भदौ, काठमाडौं । प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएका डन दिनेश अधिकारी ‘चरी’को शव बुझ्न उनको परिवार सहमत भएको छ । सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी...
६ भदौ, काठमाडौं । जनजाति पार्टीहरुको मोर्चा ‘पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धन’ले गाई मारेको अभियोगमा धरपकड भएको भन्दै विरोध गरेको छ । गठवन्धनको शुक्रबार बसेको...
६ भदौ, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार साँझ १ सय १२ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)हरुको सरुवा गरेको छ । ९ डिआइजीको एआइजीमा...
यातना दिएको भन्दै पतिको हत्या
२६ सभासद मनोनयनबारे कांग्रेस र एमालेबीच छलफल
क्वाक र चेङ्गु नामका नयाँ जनावर नेपालमा भेटिए
दैलेख चिनाउन काठमाडौंमा फोटो प्रदर्शनी
भदौ ६, काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट बैंक, बिमा तथा वित्तिय क्षेत्र कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय समितिले अख्तियारले कर्मचारीहरुलाई अनाहकमा दुःख दिएको भन्दै आपत्ति...
६ भदौ, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले मोहन वैद्य र मात्रिका यादवका पार्टीलाई समेत मिलाएर महाधिवशेन आयोजक समिति गठन गर्ने गृहकार्य थालेको छ ।...
६ भदौ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले सरकार सन्चालनमा कांग्रेसले दादागिरी देखाएको आरोप लगाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघले शुक्रबार राजधानीमा...
सप्तरीका २६ विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय
यू-१६ च्याम्पियन क्रिकेटरलाई सरकारले जनही ५० हजार दिने
पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको विवाद मिल्यो
सुनकोशी पहिरो पीडितलार्इ गाउँ पर्यटन मञ्चको राहत
अामा र शिशुको मृत्युपछि वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज तनावग्रस्त
२५ हजार जनाले हाले फेसबुक माथि मुद्दा, ४ दिनभित्र कारण देखाउन आदेश
गोपनियता उल्लंघन गरेको आरोपमा फेसबुक विरुद्ध कानूनी लडाइँमा रहेका एक विद्यार्थीलाई ६० हजार जना फेसबुक प्रयोगकर्ताले साथ दिएका छन् । अस्टि्रयाका म्याक्स सिरेम्स नामका ती विद्यार्थीले आफ्नो फेसबुक विरुद्धको कानूनी लडाइमा ६० हजार फेसबुक प्रयोगकर्ताले समर्थन जनाएको दाबी गरेका छन् । गोपनियता उल्लंघन गरि फेसबुकले प्रत्येक प्रयोगकर्ताको ५ सय
६ भदौ काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले दैवी प्रकोप पीडितलाई दुई करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ...
कम्प्युटरमा काम गर्दा अल्छी मानेर माउस चलाउनुहुन्छ ? काम गर्दागर्दा दिक्क लागेर कहिलेकाहीँ माउसलाई टेबुलमा पछार्नुपनि भएको छ होला...
३७ बर्ष अघि, जीवनमा पहिलो चोटी 'ब्लु फिल्म' हेर्नहेर्न म डराइ डराइ हनुमान ढोका प्रहरी कार्यालय नजिकै रहेको घरमा...
बिजनेस जलविद्युत विकास कम्पनीले बैंकलाई आठ अर्बसम्म पुनरकर्जा दिने
६ भदौ काठमडौं । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले बैंकहरुलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न दीर्घकालीन पुनरकर्जा दिने भएको छ । बैंकहरुले जलविद्युत आयोेजनामा लगानी गर्दा लिएको व्याजदरमा तीन प्रतिशत व्याजअन्तर (स्प्रेड) राखेर थोक कर्जा तथा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक रौनियारले जानकारी दिए । जसअनुसार कुनै बैंकले जलविद्युत आयोजनामा ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ...
मिना राई बनिन् वेस्टर्न युनियनको नवौं विजेता
६ भदौ, काठमाडौं । वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरले ग्राहकहरुका लागि ल्याएको साप्ताहिक पैसा दोब्बर योजनाको नवौं विजेता मिना कुमारी राई खापुङ बनेकी छिन् । तेह्रथुम जिरिखिम्ती निवासी राईले वेस्टर्न
६ भदौ काठमाडौं । विस्तार गरेको कर्जा तोकिएको समयमा नउठेपछि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा १६ वाणिज्य बैंकको निस्त्रिmय कर्जाको मात्रा बढेको छ । सञ्चालनमा रहेका ३० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये
दैवी प्रकोपका पीडितलाई एनसेलको २० करोड सहयोग
६ भदौ, काठमाडौं । एनसेलले देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले पीडित परिवारका लागि २० करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक दायित्व...
रोहित र करण ‘राम-लखन’को रिमेक बनाउँदै
धर्म प्रोडक्शनले नयाँ घोषणा गर्दै ‘राम-लखन’को रिमेक गर्न लागेको घोषणा गरेको छ । करण जोहरले निर्देशक रोहित सेट्टीले एक क्लासिकल सिनेमा बनाउन लागेको जनाएका...
लोकगायिका ज्योती मगरको अन्र्तवार्ता रोकिएको छ । एनटीभी प्लसबाट प्रशारण हुँदै आएको ‘टी टाइम’मा उनको पहिरन भड्किलो भएपछि अन्र्तवार्ता रोकिएको हो । उनको छाती...
करिश्मालाई ‘नारी सम्मान’
नायिका करिश्मा मानन्धर लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय महिलाहरु सम्मानित भएका छन् । लायन्स क्लब अफ काठमाण्डौ डायमण्डको आयोजनामा आज काठमाण्डौमा उनीहरुलाई सम्मानित गरिएको हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिल बहादुर थापाले उनीहरुलाई सम्मानित...
प्रवास एनआरएन भवन बनाउन अमेरिकाबाट झण्डै १ करोड संकलन
टेक्सास । गैरआवासीय नेपाली संघको काठमाण्डौमा केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन अमेरिकामा संचालन भइरहेको अर्थ संकलन अभियानमा झण्डै १ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेको उपस्थीतिमा संचालित उत्तर अमेरिकाका...
रामचन्द्र नेपाल क्वालालम्पुर । मलेसियामा एक नेपालीको ज्यान गएको छ । झापाको चकचोक घर भइ रोजगारीको लागि जोहोरको तिव्राउमा रहेको जेसिवाई कम्पनीमा कार्यरत ३३ वर्षीय हर्कबहादुर निरौलाको बिहीबार साँझ ज्यान गएको हो । कम्पनीले उपचारमा ध्यान नदिएको भन्दै कम्पनीमा...
६ भदौ,स्याङ्जा । स्याङ्जा परिवार दक्षिण कोरियाले जिल्ला अस्पताललाई निशुल्क एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको छ । दक्षिण कोरियामा गरिएको सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट संकलित रकमले एम्बुलेनस प्रदान गरिएको हो ।
‘डि मारिया मेस्सी र रोनाल्डोभन्दा उत्कृष्ट’
६ भदौ, काठमाडौं । विश्वकप विजेता सीजर मेनोटीले गत सिजन स्पेनमा अर्जेन्टिनी विंगर एन्जल डि मारिया उत्कृट खेलाडी रहेको बताएका छन्...
६ भदौ, काठमाडौं । एसी मिलानका स्ट्राइकर मारिया बोलोटेली लिभरपुलमा मेडिकलका लागि इङ्ल्याण्ड उडेका छन् । उनले झण्डै १६ मिलियन पाउण्डमा लिभरपुल आउन लागेका हुन् । २४ वर्षीय इटालियन यू-१६ च्याम्पियन क्रिकेटरलाई सरकारले जनही ५० हजार दिने
६ भदौ, काठमाडौं । एसीसी यू-१६ पि्रमियर क्रिकेटको विजेता नेपाली टोलीका सदस्यहरुलाई जनही ५० हजार दिने घोषणा गरेको छ । विजेता टोलीको सम्मानमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले शुक्रबार गरेको डि मारियाले रियल मड्रिड छाड्ने
दुइ जना गाउँलेले पटक पटक सुन्तलाका गेडाले हिर्काउँदा दक्षिण अफ्रिकाका एक किसानको ज्यान गएको छ । बारीमा सामान्य विषयमा बारीमा भएको झगडाका क्रममा ३८...
आमाबाउले बनाए आफ्नै बच्चालाई सलाद !
बच्चाको सलाद ? सुन्दैमा झसँग भइने । एक चिनिया दम्पतिले भने आफ्नो बच्चालाई सलाद बनाइदिएका छन् । खाना खाने सबै परिकारसँग आफ्नो बच्चालाई समेत...
अन्तराष्ट्रिय समाचार इरोम शर्मिला फेरि पक्राउ परिन्
६ भदौ, काठमाडौं । भारतका सामाजिक कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिलालाई प्रहरीले फेरि पक्राउ गरेको छ । अदालतको आदेशपछि बुधबार...